IPTC2020 dia voaomana avokoa ary vonona! -News-Ningbo Joiwo Explosion proof Technology Co., LTD
FIAINANA: 2020-01-14 HITS: 43
Ny andiany 12 faha-5 Fihaonambe iraisam-pirenena momba ny solika solika (IPTC) dia notontosaina tamin'ny 13–15 Janoary 2020 tao amin'ny Dhahran EXPO tany Dhahran, Fanjakan'i Arabia Saodita, miaraka amin'ny Saudi Aramco miasa ho Exclusive Host Organization.
Ny IPTC dia ezaky ny fiaraha-miasa eo amin'ny American Association of Petroleum Geologists (AAPG), the European Association of Geos Scientists and Engineers (EAGE), the Society of Exploration Geophysicists (SEG), and the Society of Petroleum Engineers (SPE).
Ny minisitry ny angovo isam-paritra, ny mpitarika ny indostria ary ny solontenam-panjakana dia hanana fotoana hiresahana sy hizarana ny hevitr'izy ireo momba ny lohahevitra sy ny fironana ara-potoana ara-potoana, ny fahaizana mifanakalo sy ny traikefa, ny haitao sy ny zava-baovao ankehitriny, ary handrisihana ny fikarohana bebe kokoa momba ny hetsika ara-teknika sy ara-barotra.
Ankoatr'izay, ho maro ny olona eto toy ny Executive Management avy amin'ny NOC, IOCs & Company Companies, Geoscience and Reservoir Discipline Experts, Experiens momba ny fifehezana sy ny famitana ny fifehezana, ny manampahaizana ary ny fanamboarana ny fifehezana ny fifehezana, ny mpahay siansa, ny teknolojia ary ny mpikaroka, ny lohatenim-pifanarahana sy ny mpividy, ny fampandrosoana ny saha , Manam-pahaizana momba ny famokarana sy ny fiasa, ny tompon'andraikitra ao amin'ny Indostria, ny mpiasan'ny minisitera sns.
Ningbo Joiwo's telefaona indostrialy azo ampiasaina amin'ny sehatry ny solika sy gazy, miaraka amin'ny taratasy fanamarinana IP nipoaka sy tsy misy vovoka / tsy tantera-drano. Amin'izao fotoana izao, ny fanjakana dia manohana fatratra ny indostrian'ny solika sy gazy, ary ny fifandraisana mifandraika amin'izany koa dia toerana iray lehibe hiantohana ny filaminana.
Ningbo Joiwo dia mandinika hatrany ny famoronana telefaona azo antoka, mahomby sy avo lenta mba hahafeno ny fepetra takiana amin'ny sehatra isan-karazany ary hanana fahombiazana tsara amin'ny varotra.
Ohatra, tianay haseho aminao ny telefaonay JWBT810 mipoaka vovoka be fipoahana.
1. Telefaona an-tserasera an-tsekoly, mandeha ny laharana finday. Hita ihany koa amin'ny kinova SIP / VoIP, GSM / 3G
2.Aluminum alloy maty fanodinana, hery mekanika avo ary fanoherana ny fiantraikany.
4.Zaretina fanalahidy alloy sy valopy vita amin'ny makalam-by Magnetika.
5. Fiarovana porofo amin'ny IP66-IP67.
6.Temperature dia avy amin'ny -40 degre hatramin'ny +70 mari-pahaizana.
7.Powder coated ao amin'ny UV polyester vita.
9. Fameno sy loko miloko.
11. AK, FCC, RoHS, ISO9001 no mifanaraka
1. mety amin'ny fivoaran'ny entona fipoahana entona Zona 1 sy Faritra 2.
2. Mety amin'ny rivotra iainana mipoaka IIA, IIB, IIC.
3. mety amin'ny vovoka Faritra 20, Faritra 21 ary Faha-22.
4. mety amin'ny kilasy mari-pahaizana T1 ~ T6.
5. atmosfera misy vovoka sy etona mampidi-doza, indostria mpamokatra petrochemical, Tunnel, metro, lalamby, LRT, lalan-kely, ranomasina, sambo, ranomasina, toeram-pitrandrahana, toeram-pamokarana herinaratra, tetezana sns.
Tratry ny taona --- Fihaonana fanao isan-taona an'ny Ningbo Joiwo Explosion proof Technology Co., LTD